Dharbaaxadii Cabdi Maddoobe oo Wali Ina Dhuubo Uusan ku Waansamin – Rasaasa News
Dharbaaxadii Cabdi Maddoobe oo Wali Ina Dhuubo Uusan ku Waansamin
May 24, 2009 Jwxo-shiil
Oslo – Norway [May 24, 2009], Wararka aan ka helayno dalalka Iskandaniifiyaanka [Scandanivian Countries], ayaa waxay sheegayaan in Ina Dhuubo uu wali ku dhuumaalaysanayo dalalkan, isaga oo isku dayaya in uu si sharci daro ah uga uruursado lacago sharci daro ah. Wararka naga soo gaadhaya dalka Norway ayaa sheegayaan in Ina Dhuubo uu si tuugo ah ku tagay halkaas isaga oo ay la socdaan labo nin oo ay isku beel yihiin iyo labo Jwxo-shiilo ah. Waxayna xalay ku shiriyeen guriga ninka la yidhaahdo Maxamed Dheeg Caagane oo ah wakiilka shirkada Xawaalada ee KAAH ee dalka Ingriiska, horena u ahaa Madaxa Unugta Jwxo-shiil iyo Tafatiraha Bogga Internetka ee HANQADH.com.
Dadka haweenka u badan ee uu Ina Dhuubo kula kulmay guriga Maxamed Dheeg Caagane, ayaa waxaa uu ugu cawday in loo hanjabay oo horena dhibaato loo gaadhsiiyey, waxaa kale oo uu sheegay in ragg ay isku beel yihiin lagu waxyeeleeyey dal ka mid ah dalalka reer galbeedka. Ina Dhuubo, oo ah ragga ugu munaafaqada badan ee ka mid ahaan jiray ururka Jwxo, dhawr goorna laga saaray ururka ayaa waxaa uu aad ugu faraxsan yahay dhibaatada soo gaadhay ururka Jwxo.
Ina Dhuubo, oo uu mar hore nin ka tirsan Jaliyada Denmarka ee Somalida Ogadeeniya [JDSO], uu hore ugu dhirbaaxay suuqa magaalada Copenhagen, kolkii uu uga caal waayey haween ay ku jirto Xaaskiisu. Arintaas oo aan wax gar ah loo qaadin kolkii ay aritntu gashay dhinaca haweenka. Bil ka hore ayaa uu koox haween ah xili habeen ah ku shiriyey magaalo ku taal dalka Denmarka Guriga Daboqoodhi Cabdi-Ganaf. Arintan haweenka oo dhaqanka Somalida Ogadeeniya aad ugu xun, horena ay gacanqaadyo ugu gaadheen Ina Dhuubo ayuusan wali ka waantoobin.
Ina Dhuubo oo ah ninka saddexaad ee gacan ku siiyey Jwxo-shiil dilkii Dr. Dolal, ayaa waxaa sugaysa in maalin maalmaha ka mid ah uu cadeeyo wax uu ka og yahay sida ay arinta Doktorku u dhacday.
Ina Dhuubo,oo sida ay Internet-yadu qoreen u kala dabqaadaya Jwxo-shiilada dibadaha jooga iyo Jwxo-shiil oo isaga lagu malaynayo in uu la joogo gumaysiga Itobiya. Ina Dhuubo, oo isagu ah akbar munaaf, ayaa waxaa uu dhinaca saarayaa Jwxo-shiil, waxaana uu rabaa in uu ku dilo gumaysiga Itobiya rag ka tirsanaan jiray kooxda Jwxo-shiilada oo ay hore isku jeel ahaayeen.
Ina Dhuubo oo tan iyo intii uu Jwxo-shiil martiyey gumaysiga Itobiya isna noqday nin saaxiibo ka yeeshay qaar ka mid ah xubnaha daboqoodhiyada ee jooga dalka Denmark ee ay ka midka yihiin Cabdi Ganaf iyo Idriis. Maxaad u malaynaysaan shacabka Somalida Ogadeeniyow in uu ka dhaxeeyo Ina Dhuubo iyo ragga ka tirsan baarlamaanka Kilal5, oo uusan ka bixin guryahooda, maalin walbana uu kula qayilo goobo khaas ah. Waxaan u sheegi lahaa shacabka Somalida Ogadeeniya in uusan Ina Dhuubo oo ku taagan wadadiid uu ku tagi lahaa Kilalka in uusan war idinka gaynin oo uusan iibsanin magaciina sidii ay sameeyeen saaxiibadiis Jwxo-shiilo, oo aad maanta og tihiin in ay hoos fadhiyaan xukuumada Tigreega.
Jaliyada Norway ee Somalida Ogadeeniya [JNSo], oo iyadu diiday in uu soo hor istaago Ina Dhuubo iyo ruux ka socda Jwxo-shiilada midna, ayaa na soo gaadhsiisay diidmada iyo waliba sida foosha xun ee uu u doonayo in uu sii kala dilo bulshada reer Ogadeeniya ee ay horeba u kala irdheeyeen. Ina Dhuubo oo isagu qaba cudurka kalsooni darada ee hoosaynta [inferiority compexity] oo aan la garanaynin meel ay ka raacday, ayey farxadiisu tahay kolka oo labo ruux si khilaaf ah isaga hor keeno. Shaqada ugu wayn ee uu leeyahayna waxaa weeye dirediraanimada iyo iska horkeena saaxiibada.
Ina Dhuubo waxaa lagu xusuustaa sanadkii 1993, sidii uu daaqada uga tuuray saaxiibadiis ay xabada rootiga ah ku kala goosan jireen Siiriya oo ay ka mid ahaayeen Ismaaciil Sheekh Cabdi, Siyaad Badri iyo Taflow oo aan ilaa iyo maalinkan maanta ah meela lagu ogayn geeri iyo nolol.
JNSO, ayaa waxay uga digaysaa qoysaska ay ka kooban tahay Jaliyadu in ay ka fogaadaan Ina Dhuubo, wixii dhibaata ah ee soo gaadhana ayna odhan karin hore na loogama digin.Waana in ay ka ilaashadaan haweenkooda in aan habeen madow hoosta guri lagaga xidhanin oo ayna keenin burbur ku yimaada qoysaska.
The Different Tactics and Techniques TPLF Regime uses to Maintain its Power
Dagaal u Dhaxeeya labo Jabhadood oo ka Dhacay Aaga Godey